Uhlelo lwesibili lwe-AlhóndigaBilbao scholarship | Izincwadi Zamanje
Hhayi-ke, ithuba lesibili lokuwina lokhu selivele liyaqhubeka beca amnandi kakhulu, kusukela esandleni se Ihholo ledolobha laseBilbao futhi kusukela enkabeni ye- U-Alhóndiga. Khumbula ukuthi owawina uhlelo lokuqala, isiCatalan UClara Tanit usevele ushicilele umsebenzi wakhe wokuqala nge I-Astiberri.
I-AlhóndigaBilbao yethula umfundaze wayo wesibili wamahlaya ngaphansi kohlaka lwe-Angouleme International Comic Festival (eFrance)
* Umuntu othola umfundaze uzojabulela ukuhlala unyaka owodwa e- "La Maison des Auteurs" (The House of Authors) e-Angouleme, isikhungo samahlaya esihlonishwa kakhulu eYurophu, ukuze asebenzele iphrojekthi yomdwebo wamahlaya.
* Ijaji elizonquma ngalesi sifundo lizokwakhiwa ngabantu abadumile abavela ezweni lamahlaya, futhi eliholwa ngumdwebi wamakhathuni odumile uPaco Roca, owine iNational Comic Award.
* Njengamanje, uClara-Tanit Arqué, onqobe umfundaze wangonyaka odlule, uthokozela umfundaze e-Angouleme futhi uzobe ekhona engqungqutheleni yabezindaba ezonikezwa lapho nguMqondisi Ophethe wase-AlhóndigaBilbao, eMarian Egaña.
Bilbao, Januwari 29, 2009. I-AlhóndigaBilbao inika futhi ithuba lokujabulela umfundaze wamahlaya. Lesi yisibonelelo u-AlhóndigaBilbao afuna ukukhuthaza ngaso ukudala nokukhuthaza ukuvela kwamathalenta amasha emkhakheni wamahlaya. Ukwenza lokhu, kusungule umfundaze wamahlaya ozoklonyeliswa kulo nyaka onyakeni wesibili olandelanayo, afuna ukuxhasa ngawo ukufezekiswa kwephrojekthi ekhethwe ngamanani ayo wobuciko nohlamvu olusha.
I-AlhóndigaBilbao izokwethula le mfundaze kusasa ngoLwesihlanu eCiudad Internacional del Cómic, e-Angoulême (eFrance), kulezi zinsuku ebungaza i-International Festival yayo yomlando wezithombe. UMkhosi wangonyaka odlule wahlanganisa abantu abacishe babe ngama-250.000 ngesikhathi somgubho wawo.
Le nhlangano, iCiudad Internacional del Cómic futhi ikakhulukazi, i-'La Maison des Auteurs 'yayo (Indlu Yababhali), ibambisene ne-AlhóndigaBilbao ekunikezeni lo mfundaze.
Indlu Yababhali base-Angoulême iyisikhungo sokuhlonishwa kwamazwe omhlaba, esiseFrance, esizinikezele kumahlaya nakwezinye ubuciko be-audiovisual (amafilimu e-animated, imidlalo yevidiyo, ... njll.) Futhi emukela ababhali ebanikeza izimo ezisebenzayo ezinhle. ekudalweni, ngenhloso yokwenza iphrojekthi yakho kuyo.
Selokhu yavulwa ngo-2002, iLa Maison des Auteurs de Angoulema yamukele ababhali abangaphezu kwabangamashumi ayisikhombisa besilisa nabesifazane, abasha nabachwepheshe, abavela eFrance nakwamanye amazwe, ukuthuthukisa amaphrojekthi ahlobene namahlaya noma ukuxoxa izindaba. Bonke laba babhali bahlomule ngohlaka lwezinto zokusebenza zamahhala, kumhlangano wokusebenzela oyedwa noma ohlangene, ohlonyiswe ngezinto ezidingekayo zokwenza izithombe (isiteshi samakhompyutha, ibhodi yokudweba, isithwebuli, ... njll.).
Izikhala ezijwayelekile zenziwa zitholakale kubemukeli bemifundaze, njengegumbi lekhompyutha nelokubhala kabusha, igumbi lokubhala, umbukiso negumbi lenkomfa, phakathi kwezinye izinsiza.
* Indawo yokuhlala efulethini kuze kufike ezinyangeni eziyishumi nambili (ugesi, igesi namanzi egameni lomunye umuntu).
* Ukutholakala kwemishini nazo zonke izinsizakalo zeLa Maison des Auteurs.
* Ama-euro ayinkulungwane ngenyanga kuze kufike onyakeni omkhulu.
* I-AlhóndigaBilbao, iyodwa noma ibambisene nomshicileli oyingcweti, izocwaninga ukuthi kungenzeka yini ukuthi ishicilelwe le phrojekthi ngonyaka olandelayo wokuphela komfundaze. Ukushicilelwa, uma kukhiqizwa, kuzoba ngesiBasque nangeSpanish.
Ukufaka isicelo se-AlhóndigaBilbao-Cómic scholarship, abazobhapathizwa kumele bahlangabezane nalezi zidingo ezilandelayo:
* Ukuba ngaphezu kweminyaka engu-18, ngihlala eSpain futhi ngingafundi kunoma yisiphi isikhungo esisemthethweni.
* Yethula iphrojekthi yokudala amahlaya (ngesiBasque noma ngeSpanishi) evumela ukubonwa okulungile komsebenzi kungaba ngephepha noma ifomethi yedijithali.
Isikhathi esinqunyiwe sokuletha amaphrojekthi ngu-Ephreli 14, 2009 kanti isinqumo sejaji sizomenyezelwa ngoJuni 2009. Lowo ophethe imfundaze uzoqala ukuhlala kusuka ngoJanuwari 2010.
Ijaji elizokwenza lokhu kuzokhethwa lizoba ngabadwebi bamakhathuni, ababhali bamabhayisikobho kanye nabagxeki abakhethekile besithunzi esaziwayo kulo mkhakha futhi bazoholwa nguPaco Roca, osanda kuklonyeliswa ngeNational Comic Prize futhi uzoba yingxenye yawo: Álvaro Pons, Juan UManuel Díaz de Guereñu, uPaco Camarasa, uJosé Ibarrola no-Antonio Altarriba.
Lesi sinyathelo se-AlhóndigaBilbao siyingxenye yesivumelwano esibanzi sokubambisana esisayinwe ne- "Cité internationale de la Bande dessinée et de l´image" ukukhuthaza zombili izinhlelo ezihlobene namahlaya kanye nezinye izitayela zokulalelwayo ezisakhulayo njengamanje.
'La Maison des Auteurs ”ka-Angoulema
Kusukela ekudalweni ngo-1974 kwe-International Comic Festival yokuqala, i-Angoulema isizibeke njengenhloko-dolobha yobuciko be-9.
Ngesikhathi salo mcimbi, izinhlaka ezahlukahlukene - iNational Comic Strip Center, iSikole Sokugqwayiza Amafilimu Okuhwebelanayo - zikuthandile ukuvela kwamandla ashukumisayo wedolobha nesifunda salo.
Ukuze unikeze ukwesekwa kokhonkolo kubadali bezithombe abahlala e-Angoulema noma abafisa ukuhlala e-Angoulema, 'i-La Maison des Auteurs' yadalwa, iminyango yayo yavulwa ngoJulayi 2002.
'La Maison des Auteurs ”ihlose ukwenza lokhu:
* Nikeza izimo zokusebenza ezifanele ukudala indalo, wamukela ababhali ukuthi bafeze iphrojekthi yobungcweti kuyo,
* Thula umbukiso wendalo emkhakheni wamahlaya, opopayi ne-multimedia, ngemibukiso nemicimbi,
* Phakamisa isikhungo semithombo yezobuchwepheshe kanye nedokhumentari,
* Yakha indawo yemihlangano nezingxoxo,
* Siza ukuvikela umthetho wombhali futhi uvikele impahla ebhaliwe emkhakheni wezokudalwa kwezobuciko.
Selokhu yavulwa, iNdlu Yababhali yamukele abadali abahlukahlukene namathalente amancane noma ababhali abaqinisekisiwe, abavela eFrance nakwezinye izindawo ezinjengoJimmy Beaulieu, odabuka eQuebec, abaseMelika uRichard McGuire noJimmy Johnson noma uNikolaï Maslov waseRussia.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » Uhlelo lwesibili lwe-AlhóndigaBilbao scholarship
UGonzalo Lara C kusho
Ngithatha ikhomikhi ubuciko besimanjemanje obubaluleke kakhulu emlandweni, obudala isiko elihlaba umxhwele futhi elinamandla emakethe eliheha abalandeli abaningi ngokwengeziwe ngoba kudala ukuphazamiseka nokuzijabulisa okusebenzisekayo kulesi simo esinesiyaluyalu sokungabekezelelani esiphila kuso njengamanje.
Ngithumela lokhu njengoba ngingumculi wobuciko walobu buciko futhi ngingathanda ukushicilela umsebenzi womuntu siqu.
Phendula uGonzalo Lara C
USilvina Ocampo nenye yezindaba zakhe